सनसिटीभित्रका २ जनामा कोरोना पुष्टि भएपछि ५ सय १० परिवार त्रासमा ! – Sagarmatha Online News Portal
सनसिटीभित्रका २ जनामा कोरोना पुष्टि भएपछि ५ सय १० परिवार त्रासमा !
काठमाडौं । पेप्सीकोला-टाउनप्लानिङमा रहेको सनसिटी अपार्टमेन्टमा एकै परिवारका २ जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि अपर्टामेन्टभित्र त्राश छाएको छ । त्यहाँ बस्ने ५ सय १० परिवारका करिब १५ सय जना अहिले कडा क्वारेन्टाइनमा छन् । अपार्टमेन्ट वरिपरीका बासिन्दा पनि घरबाट बाहिर निस्केका छैनन् ।
गत ५ गते बेलायतबाट नेपाल आएका आमा, छोरा र बुहारी यस अपार्टमेन्टको ‘ए’ ब्लकको १४ औं तल्लामा बस्दै आएका थिए । आमा ८१ वर्षीया, छोरा ५८ वर्षीय र बुहारी ५२ वर्षिया हुन् । उनीहरुमध्ये आमा र छोरामा कोभिड-१९ पुष्टि भएको छ र्। यापिड टेस्टमा छोरालाई पनि पोजिटिभ देखाएको थियो तर, टेकु प्रयोगशालामा गरिएको पीसीआर टेस्टमा नेगेटिभ देखियो ।
अपार्टमेन्टमा ६ वटा ब्लकहरू रहेका छन् । संक्रमितहरु बस्ने ब्लकमा करिब १ सय परिवार बस्छन् । एउटा फ्ल्याटमा ६ वटा परिवार बस्छन् । ब्लकका सबैले साझा लिफ्ट प्रयोग गर्छन् ।
अपार्टमेन्ट शील गरिएपछि यहाँभित्रका बासिन्दाहरू दैनिक उपभोग्य सामानहरुको आपूर्तिको पनि चिन्तामा छन् ।
यद्यपि, समितिले यसको व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । भित्रबाट आवश्यक सामानका सूची टिपाउने, पसलवालाले मुल गेटमा ल्याएर राख्ने र त्यहाँबाट सबैले पालैपालो लैजाने गरि व्यवस्था मिलाउन छलफल भइरहेको समितिका एक सदस्यले बताए । जारको पानी भने भित्रैबाट वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
गत ८ गते अपार्टमेन्टभित्रै वेलफेयर कमिटीको चुनाव गरिएको थियो । कोभिड-१९ संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाम समन्वय उच्चस्तरीय समितिले ५ चैतमै २५ जनाभन्दा बढि भेला हुन रोक लगाएको थियो । अर्थात चुनाव सरकारको निर्देशन विपरीत थियो ।
अपार्टमेन्ट परिसरमा छुट्टै चार तल्लाको भवन छ । सोही भवनभित्र रहेको सामुदायिक हलमा साधारणसभा तथा चुनाव भएको हो । बाहिर चर्चा भएजस्तो अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा भने त्यहाँ आएका थिएनन् । सोही अपार्टमेन्टमा बस्ने उनका छोरा तिलक खतिवडा चाहिँ चुनावमा उम्मेदवार भएर सचिवमा निर्वा्चित भएका थिए । एउटा बैंकमा काम गर्ने उनी ‘बी’ ब्लकमा बस्छन् ।
नगरप्रमुख कृष्णहरि थापाका अनुसार सनसिटी अपार्टमेन्टमा पनि विदेशबाट आएकाहरू भएमा परीक्षणका लागि आउन खबर गरियो । नगरपालिकाले सोमबारबाट परीक्षा सुरु र्गयो । तीन ठाउँमा प्वाइन्ट बनाएर परीक्षण गरिएको थापाले जानकारी दिए ।
६१ जनामध्ये हिजो ३ स्थानमा ३६ जनाको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो । संक्रमित परिवारका ३ जना परीक्षणका लागि मुलपानी नगर अस्पतालमा आएका थिए । नगरप्रमुख थापाका अनुसार अस्पताल आउँदा तीनैजना सामान्य अवस्थामा थिए ।
यापिड टेस्टको रिपोर्ट आउन करिब १५ मिनेट लाग्छ । त्यसैले ३ जना रिपोर्ट नआउञ्जेल त्यहीँ पर्खेर बसेका थिए । रिपोर्टमा पोजिटिभ देखिएपछि उनीहरु अपार्टमेन्ट फर्किन पाएनन् ।
‘अपार्टमेन्टमा बस्ने सबैको परीक्षण गर्ने कुरा मन्त्रालयबाट आएको छ । साथै, उनीहरु यो बीचमा कहाँ-कहाँ गए र कोको मानिसहरु भेटिए भन्ने पनि ट्रेसिङ गर्नुपर्ने अवस्था छ । नगरपालिकाको मात्रै स्रोत साधनले भ्याउँदैन । केन्द्र सरकारसँग समन्वय गर्छौं,’ उनले भने ।
कतिपय केसहरूमा चाहिँ संक्रमणको लक्षण नै देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा संक्रमण फैलिनसक्ने जोखिम बढि हुन्छ । नगरपालिकार्ले यापिड टेस्टका लागि नबोलाएका भए यो परिवारको संक्रमण अझै बाहिर आउने थिएन ।
१४ दिनभित्र संक्रमणको लक्षण देखिन्छ भन्ने विश्वासका कारण पछिल्ला दिनमा काठमाडौंलाई कोरोनाबाट सुरक्षित रहेको मान्न थालिएको थियो । किनकी नेपालले अन्तराष्ट्रिय उडान रोकेको र देशभित्र लकडाउन गरेको नै तीन हप्ता भइसक्यो । तर, यो केसले फेरि नयाँ उल्झन थपिदिएको छ ।
सनसिटी अपार्टमेन्टमा बस्ने कांग्रेस नेता रमेश रिजालले चाँडो भन्दा चाँडो अपार्टमेन्टभित्र सबैको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘अहिले यहाँभित्र सबैलाई संक्रमणको त्राश छ । छिटो परीक्षणको व्यवस्था मिलाएर उहाँहरुलाई आस्वस्त पार्नुपर्छ ।’ अनलाईन खबरबाट